yondla i-crusher iyathengiswa,umatshini wokutya izilwanyana crusher intlanzi,iinkomo,igusha
Umzekelo:VTSP56 * 36
Amandla:22KW izigaba ezithathu
Ububanzi beChule lokuGaya:360 mm
Imveliso yokugqibela:umgubo ocolekileyo
Isetyenziselwe:ukwenza ukutya kwenkukhu,ukutya kweenkomo,,ukutya kweentlanzi,ukutya kwesilwanyana
umatshini wokutya we crusher sisixhobo esikhethekileyo sokuqhekeza izixhobo ezinkulu zenze umgubo ocolekileyo. Izixhobo ezityhobozwe ngamanqatha esando ngamazinyo aqhelekileyo zihlala zingama-0.6-1.5mm; kwaye etyhobozwe ngamazinyo amnandi ingu-1-2.5mm.feed umatshini wokutyhoboza ngumatshini ukhethekileyo kwizinto zokutyhoboza ngengxabano phakathi kwesando nesantya esiphezulu,Umxhesho wokutya wezilwanyana ngumatshini ojolise ekutyhobozeni iimpahla ngokudibana phakathi kwesando nesantya esiphezulu kwizixhobo. Izinto eziluhlaza kwindawo yokutyisa zixutywe kwiisenti ezifanelekileyo ze-chembe ze umxube wokutya indibano. Ubungakanani bokugqibela bezinto ezinokulawulwa ngokufaka isikrini ngemingxunya eyahlukeneyo yobukhulu. Ngexabiso lokukhuphisana, ulwakhiwo olulula kunye nokusebenza okuphezulu, umatshini wokutya izilwanyana usetyenziselwa ifama, umzi mveliso ophakathi wokutya okanye osapho.
Umatshini wokutya we crusher ubonakalise izibonelelo
● Kulula ukusebenza, ukusetyenziswa kwamandla athile okuphantsi, Ukugraya imveliso ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo
● Uyilo olusengqiqweni: ubungakanani bokugqibela bezinto ezinokutshintshwa ngokutshintshwa kwesikrini sokugqibela. Ukongeza ukutshintsha kwesayizi yesikrini, kunye nokukhethwa kwesantya esitshintshayo sokuqhutywa kwesantya sedrayivu, yenza ukuba i-crusher isebenze ngezinto ezahlukeneyo.
● Izinto eziphambili ze-hammers zenziwe ngentsimbi ye-carbon alloy esemgangathweni, ihlala ixesha elide kwaye ayinakunyanzelwa. Ubomi obude kunye nokuqina.
Isicelo soKhuseleko lwaZilwanyana
Indawo yokondla izilwanyana isetyenziswa kakhulu efama, umzi mveliso ophakathi wokutya okanye osapho. Le grinder yokondla ingasetyenziselwa ukunciphisa uninzi lwamasuntswana:
Izixhobo zolimo, njengengqolowa, umbona, Isiqu sombona, igobolondo, ingca eyomileyo, isitya somqhaphu, njl.;
♦ Izixhobo zamachiza kunye nezemizi-mveliso, njengezityalo zamayeza amaTshayina, Quartz, amalahle, intsalela yamalahle, iinkuni, njl
Izinto eziluhlaza zokutya ezityiwayo batyunyuzwa kwiisayizi ezifanelekileyo zamacwecwe omxube wokudibanisa. Ubungakanani bokugqibela bezinto ezinokulawulwa ngokufaka isikrini ngemingxunya eyahlukeneyo yobukhulu. Ngexabiso lokukhuphisana, ulwakhiwo olulula kunye nokusebenza okuphezulu, umatshini wokutyisa izilwanyana uxinzelelwa ikakhulu kwifama, umzi mveliso ophakathi wokutya okanye osapho.
Yondla umatshini ochazayo
Umzekelo VTSP56 * 30 VTSP56 * 36 VTSP56 * 40 VTSP60 * 45
I-VTSP960 * 75
Ububanzi beChule lokuGaya
Ividiyo yomatshini wokutya crusher